U-Apple usimema ukuba sihambe noJane Fonda ngoMhla woMhlaba | Ndisuka mac
U-Apple usimema ukuba sihambe noJane Fonda ngoMhla woMhlaba
Ubudlelwane bomdlali weqonga uJane Fonda, buyela, kwakhona ukuba buhlangane noApple, nangona ngeli xesha ngqo. Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, sikwazise ngezicwangciso zalo mdlali wokubeka ilizwi kwifilimu yoopopayi ngethamsanqa Kwinamba eneenkwenkwezi ebalini.
Ukusukela namhlanje ngo-Epreli 19, ngaphakathi kwexesha lokuhamba kwe-Apple Fitness +, ngaphakathi kwesicelo soQeqesho, sinakho isiqendu esitsha sokukhuthaza abasebenzisi ukuba bahambe. Ngeli xesha, malunga noJane Fonda.
Esi siqendu, ngoku siyafumaneka, sigxile kwimisebenzi enxulumene nemidlalo ye bhiyozela uSuku lwe Umhlaba, apho uFonda athetha ngobomi bakhe, kunye nokulwa notshintsho lwemozulu. Umdlali weqonga uye waba ngomnye wabakhuseli abanesidingo sokuthatha amanyathelo ngokuchasene neziphumo ezibangelwa lutshintsho lwemozulu kwiplanethi kunye nendlela enokuthi ilichaphazele ngayo ikamva labathandekayo bethu.
UFonda ujoyina abanye abantu abadumileyo njengoWanda Sykes, Anthony Ramos, UDolly Parton, uShawn Mendes, Uzo Aduba, kunye noDraymond Green. Rhoqo ngoMvulo, uApple ulayisha isiqephu esitsha kule nkonzo, iziqendu ezithi babe nemizuzu engama-25 ukuya kwengama-40 kwaye zifumaneka kuphela kubo bonke abasebenzisi beFitness +. Xa umsebenzisi ekhetha enye yezi ziqendu, ukuzilolonga kuqaliswa ngokuzenzekelayo.
Ixesha lokuhamba liyasinika amabali akhuthazayo anomdla ukukhuthaza umsebenzisi ukuba ahambe ukuzivocavoca umzimba kwaye yinxalenye yeApple Fitness +, inkonzo yoqeqesho yokubhaliselwa exabiso layo li- $ 9,99 ngenyanga kwaye yakhiwe malunga neApple Watch. Okwangoku, izicwangciso zika-Apple zokwandisa le nkonzo ngaphandle kwe-United States azaziwa, kodwa xa isenzeka, kusenokwenzeka ukuba izakufika kuqala e-United Kingdom, e-Australia nase-Canada njengesiqhelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » U-Apple usimema ukuba sihambe noJane Fonda ngoMhla woMhlaba
I-Apple Music ihlawula amagcisa aphindwe kabini njengeSpotify
Iinkqubo zokuntywila "kwe-anti-bubble" zazisetyenziselwa ukwenza ifilimu "iMicroworlds" kwiApple TV +